Famantarana Crypto maimaim-poana tsara indrindra Jona 2022 & Vaovao Crypto | cryptosignals.org
Sehatra varotra Crypto tsara indrindra
Inona ny tsenan'ny Crypto ary nahoana ianao no tokony hampivarotra azy? Torolàlana ho an'ny vao manomboka
Vondrona Telegram tsara indrindra amin'ny signal Crypto - Guide feno
Toerana fijanonana Crypto tsara indrindra
Broker Bitcoin tsara indrindra
Broker Ethereum tsara indrindra
Ahoana no hividianana Basic Attention Token
Ahoana no hividianana Solana
Fomba fampiasana leverage
Ahoana ny fomba famakiana mpivady
Ahoana ny fametrahana mpivarotra
Ianaro ny fomba fanaovana varotra Crypto androany
Mianara miketrika Crypto Trade
Inona ireo Crypto Pips
Mividiana Crypto amin'ny carte de crédit
Mividiana Crypto amin'ny carte de crit
Midira amin'ny vondrona VIP Telegram anay
Mametraha $250 miaraka amin'ny eToro hahazoana fidirana mandritra ny androm-piainany amin'ny Signals VIP
Mahazoa famantarana VIP maimaim-poana!
Varotra CFD an'arivony Varotra CFD an'arivony
Sinyal Crypto tsara indrindra 2022
Ny CryptoSignals.org dia ekipa mpivarotra efa niofana be izay mivarotra ny tsenan'ny cryptocurrency hatramin'ny 2014
Nanapa-kevitra ny hanangana fiaraha-monina izahay telegrama mba hahafahan'ny hafa mianatra avy amin'ireo famantarana marina momba ny cryptocurrency.
Midira amin'ny telegrama maimaim-poana
Sokafy ny famantarana ny Cryptocurrency isan'andro
Miaraha aminay Vondrona VIP amin'ny fisafidianana fonosana eto ambany mety aminao, dia manome antoka miverina mandritra ny 30 andro izahay mba tsy hisy ho very amin'ny fanandramana ireo famantarana cryptocurrency avo lenta.
no voalaza Isam-bolana £ 42
2-3 Fambara isan'andro
82% ny tahan'ny fahombiazana
Entry, Raiso ny tombony & Atsaharo ny fatiantoka
Vola amin'ny risika isaky ny varotra
Ratio valisoa azo antoka
Malaza indrindra no voalaza isaky ny telo volana £ 78
no voalaza BI-ANNOTRA £ 114
no voalaza isan-taona £ 210
Misafidiana mpamadika tsara indrindra eto amin'ny taninao
Tonga mpivarotra matihanina!
Manokatra kaonty amin'ny iray amin'ireo broker anay. Ary mahazo fidirana amin'ny fiainana andavanandro Signal Crypto VIP tsy andoavam-bola! Misoratra anarana ary apetraho ny $ 250 farafahakeliny miaraka amin'ny broker Crypto voafantinay eto ambany.
eToro dia sehatra fananana marobe izay manolotra ny fampiasam-bola amin'ny Forex, Stocks, ary Cryptocurrencies, ary koa ny varotra CFD assets. Ny CFD dia fitaovana sarotra ary atahorana ho very vola haingana noho ny fampiasana.
Ny CFD dia fitaovana sarotra ary atahorana ho very vola haingana noho ny fampiasana azy. 71.2% ny kaontin'ny mpampiasa vola antsinjarany very vola rehefa mifanakalo CFD amin'ity mpamatsy ity.
Hatrany amin'ny 500: 1 leverage, varotra CFD an'arivony sy fitaovana Leverage misy. Indices, FX, Crypto ary maro hafa amin'ny toerana iray. Mandeha lavitra izahay amin'ny fanomezana interface tsara ho an'ny mpampiasa sy endri-javatra vaovao.
Midira aminay Vondrona Telegram maimaim-poana
Mandefa famantarana VIP 3 isan-kerinandro izahay vondrona Telegram maimaim-poana, ny famantarana tsirairay avy dia miaraka amin'ny famakafakana ara-teknika feno ny antony itondranay ny varotra sy ny fomba fametrahana izany amin'ny alàlan'ny broker anao.
Makà tsiro ny maha izy azy ny vondrona VIP amin'ny fidirana maimaimpoana izao!
Midira amin'ny telegrama maimaim-poanaFantaro ny momba ny famantarana anay
Ny tranon'ny famantarana Crypto ambony indrindra
Natolotra mahitsy ho anao App Telegram amin'ny fotoana tena izy!
Ny ekipanay mpivarotra an-trano ao amin'ny CryptoSignals.org dia manaparitaka ny tsenan'ny crypto mandritra ny ora ka tsy mila izany ianao. Amin'ny alàlan'ny famakafakana fanadihadiana ara-teknika lalindalina, ny algorithma AI, ary ny fikarohana ifotony - CryptoSignals.org dia tsy mitsahatra mitady fotoana varotra ho an'ireo mpikambana ato aminay.
Raha sambany mitsidika anay ianao dia avelao izahay hanazava ny zavatra ataonay eto CryptoSignals.org
VAKIO NY FAMPANDROSOANA farany momba ny vaovaontsika Teknika sy fotodrafitrasa
Vidin'ny DeFi Coin: Ny DEFC/USD dia mahatratra $0.15 rehefa miakatra ny vidiny
Jona 25, 2022
Mety Hihena ny Ethereum satria tsy mahavita manitsakitsaka ny avo $1,200
Ny Bulls Compound (COMPUSD) dia manosika ny tsena amin'ny paikady fanamafisana
Ny vidin'ny Bitcoin Cash (BCH/USD) dia mikisaka amin'ny toerana ambany kokoa
Polkadot Bulls miaro $6.3 fanohanana rehefa miady amin'ny $8.27 avo
Solana dia namoaka ny Blockchain sy Web3-compatible Smartphone, Saga
Synthetix (SNXUSD) dia mipetraka ao amin'ny faritra be loatra.
Ny orsa Bancor (BNTUSD) dia mikendry ny $ 0.150 fanohanana ambaratonga
Lasa mora hita ny Bitcoin rehefa mihena 2.35% ny fahasahiranana momba ny harena ankibon'ny tany
Jona 23, 2022
Ny ady amin'ny vidin'ny Uniswap (UNI/USD), Mihodinkodina ho $6 eo ho eo
Ripple dia mitazona mihoatra ny $ 0.30 raha mikendry ny ambony amin'ny $ 0.38 ny Bulls
Inona no hidiranao
Vondrona VIP Signal
Raha vaovao amin'ny tsenan'ny cryptocurrency ianao ary te hahay hivarotra azy, mitantana tsara ny risika ary ataovy tombony ny kaonty varotrao dia jereo bebe kokoa momba izay atolotray etsy ambany.
Mikendry ny hahatratra 1500 pips isam-bolana isam-bolana izahay mivarotra Bitcoin!
Ny varotra tokana rehetra dia miaraka amin'ny famakafakana ara-teknika feno, manazava ny antony itondranay ny varotra, ataonay izany mba hahafahanao mianatra rehefa mifanakalo.
RATISY valisoa valisoa
Lazainay mazava tsara ny RRR (tahan'ny valisoa mety hitranga) miaraka amin'ny varotra rehetra ary miasa amin'ny tahan'ny 1: 2 & 1: 3 mba tsy hisedra loza loatra isaky ny varotra ianao ary hanana vintana avo kokoa hahazoana tombony.
Ny famantarana ataonay dia alefa amin'ny alàlan'ny Telegram, avy hatrany raha vantany vao tonga ilay famantarana, tonga hatrany aminao izany.
Amin'ny fidirana amin'ny vondrona VIP anay dia manokatra fahalalana sy traikefa betsaka avy amin'ny mpivarotra anay ianao, ny fandoavam-bola kely isam-bolana dia midika hoe miditra amin'ny ELITE ianao
Ny varotra ataonay dia tsy fanatanterahana tsena foana, noho izany dia hanana fotoana be dia be ianao hiaraka amin'izy ireo, manodinkodina varotra izahay, hodi-doha ary mampiasa karazana varotra samihafa toy ny BUY STOPS, SELL STOPS & BUY LIMIT sns sns…
Midira amin'ny vondrona Telegram maimaim-poana
Nandefa famantarana VIP 3 isan-kerinandro izahay tao amin'ny vondrona Telegram maimaim-poana, ny famantarana tsirairay avy dia misy famakafakana ara-teknika feno momba ny antony itondranay ny varotra sy ny fomba fametrahana izany amin'ny alalàn'ny mpampindram-bola anao.
Ahoana no fiasan'ny famantarana Crypto
Raha vaovao tanteraka amin'ny tontolon'ny famantarana crypto ianao dia avelao izahay handrava ireo fototr'izany ho anao ao amin'ny Layman's Terms.
Ny vinan'ny famantarana crypto dia ny fahazoana soso-kevitra amin'ny varotra. Hitranga izany amin'ny alàlan'ny fotoana tena izy
telegrama - Ka tsy ho diso anjara amin'ny varotra mety hitranga ianao. Ny famantarana tsirairay avy ao amin'ny ekipa CryptoSignals.org mandefa dia hanana andiana fampahalalana manan-danja. Ity fampahalalana ity no milaza aminao ny fomba ahazoanao tombony amin'ny famantarana ataonay amin'ny alàlan'ny fametrahana ny
kaomandy tsirairay avy amin'ny broker nofidinao. Mba hanomezana anao hevitra hoe a CryptoSignals.org Toa izany ny famantarana crypto - jereo ity ohatra LTC / USD eto ambany:
Araka ny hitanao avy etsy ambony, ireo mari-pamantarana crypto tsara indrindra dia tokony hisy teboka data dimy lehibe foana. Ity ilay mpivady crypto mihitsy - izay amin'ity ohatra ity dia LTC / USD. Ho hitanao fa ny famantarana dia mamaritra ihany koa ny fandehanana lava - midika izany fa ny mpandinika ato an-trano dia mihevitra fa hiakatra ny sandany ny mpivady. Ny tena zava-dehibe, ny famantarana crypto tsara indrindra dia tokony ho tonga miaraka amin'ny fetra takiana, ny fijanonana ary ny vidin'ny kaomandy maka tombony. Raha vaovao ianao amin'ireo fehezan-dalàna mifehy ny varotra ireo, dia tsara kokoa raha fantarinao tsara ny dikan'ireto alohan'ny hisoratra anarana amin'ny serivisy famantarana crypto.
Mba hanampiana amin'ny famongorana ny zavona, dia hazavainay amin'ny antsipiriany etsy ambany ireo teboka angon-drakitra famantarana ireo.
INONA NO TOKONY HO Endrik'ireo SIGNAL CRYPTO TSARA INDRINDRA?
Ity misy fahatapahana izay tokony ho endrik'ireo famantarana crypto tsara indrindra - sy ny dikan'ny teny tsirairay.
Ity dia manazava tsara. Rehefa dinihina tokoa, dia mandeha tsy misy filazana fa mila fantatrao hoe iza amin'ireo mpivady no misy ifandraisany amin'ny famantarana. Tokony homarihintsika fa ny mpandalina an-trano ao amin'ny CryptoSignals.org dia manam-pahaizana manokana amin'ny tsenan'ny cryptocurrency. Tsy vitan'ny hoe tafiditra ao anaty crypto-to-fiat io, fa ny mpivady crypto-to-crypto koa. Ho an'ireo tsy mahalala, ny mpivady crypto-to-fiat dia hanana vola dizitaly iray toy ny Bitcoin ary vola fiat iray toy ny dolara amerikana. Amin'ity ohatra ity dia hisolo tena ny BTC / USD ny mpivady. Raha ny tokony ho izy, ity no mpivarotra cryptocurrency be mpifaninana indrindra amin'ny indostria - miaraka amina miliara dolara manova tanana isan'andro sy isan'andro. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, maro amin'ireo famantarana crypto azonao avy aminay, CryptoSignals.org no hifantoka amin'ity tsena ity. Na izany aza, ny mpivarotra eto amintsika koa dia mahay amin'ny varotra karazana mpivady crypto-to-crypto isan-karazany. Anisan'izany ny mitovy amin'ny BTC / ETH - midika izany fa mifanakalo ny tahan'ny fifanakalozana Bitcoin sy Ethereum. Mpivady crypto hafa izay ou ...
Lava na fohy
Ny metric key fanampiny izay tsy maintsy atao ao amin'ny habaky ny signal crypto dia ny làlan'ny tsena. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tokony handeha lava sa fohy amin'ny varotra ianao? Raha tsy misy an'ity fampahalalana ity dia tsy hisy dikany ny famantarana crypto. Ho an'ireo tsy mahalala: Raha milaza aminao ny ela ny famantarana ny crypto anay, midika izany fa mieritreritra izahay fa hitombo ny sandan'ny mpivady raha toa ka milaza aminao ny fohy ny famantarana crypto, midika izany fa mieritreritra izahay fa hihena ny lanjan'ireto mpivady ireto mba hanazavana bebe kokoa: Raha manome baiko anao handeha lava ny famantarana crypto dia mila mametraka baiko mividy amin'ny broker crypto voafidinao ianao Na izany aza, milaza aminao ny famantarana fohy ny marika crypto, dia mila mifidy kaomandy mivarotra Ny ekipanay Ireo mpandalina ao amin'ny PipSignals dia mahazo aina rehefa mandeha lava sy fohy amin'ny mpivady crypto. Zava-dehibe, tsy misy fifandraisana ara-pientanam-po amin'ny vola nomerika isan-karazany izay hatakalontsika. Fa kosa, ny tanjontsika lehibe dia ny hahazo tombony amin'ilay toerana. ...
Fepetra ny vidin'ny kaomandy
Aza manao hadisoana amin'izany - ny famantarana crypto tsara indrindra dia ho avy hatrany miaraka amin'ny vidin'ny kaomandy takiana. Raha vaovao amin'ny varotra ianao, amin'ny ankapobeny dia manana safidy roa ianao amin'ny fidirana amin'ny tsena. Raha atao default dia manontany anao ny ankamaroan'ny broker an-tserasera raha te hametraka 'baiko' ianao. Midika fotsiny izany fa hanatanteraka ny varotrao eo noho eo ny broker - amin'ny vidiny manaraka. Na dia tsara ho an'ny fampiasam-bola maharitra aza izany dia tsy dia mety amin'ny varotra crypto maharitra. Izany dia satria manohitra ny risika kokoa ny miditra varotra amin'ny vidiny manokana - toy ny fikarohana ifotony izay efa natao. Ohatra, andao hatao hoe isika ao amin'ny CryptoSignals.org dia mivarotra BTC / USD - izay vidiny amin'ny $ 49,500. Ny ekipan'ny mpandinika ao an-trano dia mety mijery ireo teknika ary manapa-kevitra fa raha tokony handika ny $ 50,000 50,000 ny BTC / USD - dia tokony horaisina ny toerana lavitra. Mba hahazoana antoka fa miditra amin'ny vidiny mihoatra ny $ XNUMX fotsiny isika - fa tsy ny onja ...
Vidin'ny lamandy stop-loss
Hatreto dia napetraka izahay fa ny famantarana crypto tsara indrindra dia hilaza aminao ny mpivady tokony hivarotra, na tokony handeha lavitra na ho fohy ianao, ary ny vidin'ny fidirana tokony hametrahanao ny lamina voafetrao. Na izany aza, antsasaky ny ady ihany io. Rehefa dinihina tokoa, raha te hifanakalo varotra amin'ny fomba mahasosotra dia tokony hanana tetika fidirana amin'ny toerany ianao. Indray mandeha indray, izahay ao amin'ny CryptoSignals.org dia manome toky fa manana ny fampahalalana rehetra ilainao hahazoana tombony amin'ny famantarana crypto izahay - izany no antony nanomezantsika hatrany ny baiko fampijanonana sy fahazoana tombony. Mikasika ny fijanonana fatiantoka, ity dia fitaovana fitantanana risika izay miantoka antsika tsy hamoy vola be amin'ny varotra - raha tsy tokony handeha drafitra izany. Zava-dehibe izany, satria na dia manana firaketana an-tsoratra efa ela aza isika tamin'ny fanatanterahana ny tsenan'ny crypto - tsy milaza izahay fa handresy ny varotra tsirairay avy. Mifanohitra amin'izany, hisy hatrany ny varotra very. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia manome soso-kevitra izahay momba ny vidin'ny kaomandy fihenam-bidy sahaza anao izay tokony haparitanao rehefa mihetsika amin'ny famantarana crypto anay. Ao amin'ny cr ...
Vidin'ny kaomandy ahazoana tombony
Misy fampahalalana iray manan-danja kokoa izay homen'ny signal crypto tsara indrindra ho anao - ary izany dia vidin'ny kaomandy ahazoana tombony. Io dia mitovy amin'ny baiko fampijanonana, fa tsy hanalefahana ny loza mety hitranga, hikatsaka ny hidina amin'ny tombom-barotra amin'ny varotra izy. Ao amin'ny ohatra nomenay teo aloha, dia nanamarika izahay fa ny vidin'ny kaomandy maka tombony dia $ 238.74. Miorina amin'ny 3% ambonin'ny vidin'ny lamandy voalaza momba ny $ 231.79 - midika izany fa mitady hahazo tombony 3% amin'ity famantarana crypto manokana ity izahay. Indray mandeha indray, raha toa ka mifanaraka amin'ny tsena ny vidin'ny tombony, dia hanidy ho azy ny varotra crypto. Araka izany, afaka mihidy amin'ny tombom-barotra tsy mila mipetraka eo amin'ny fitaovantsika hivoahana amin'ny tanana isika.
Risika vs valisoa
Mialoha ny fizarana etsy ambony momba ny baiko fijanonana sy fahazoana tombony, ny ekipan'ny mpandinika antsika ao amin'ny CryptoSignals.org dia hanana ny tahan'ny risika / valisoa foana rehefa mandefa signal crypto. Ao amin'ny ohatra etsy ambony, ny risika dia 1% - satria izany no isan'ny volavolan-dalàna momba ny fijanonana. Ny ampahany valisoa amin'ny fampitahana dia 3% - satria teo no nametrahanay ny kaomandin'ny tombom-barotra. Zava-dehibe, ny ankamaroan'ny signal crypto alefanay dia hanaraka ny tahan'ny risika / valisoa 1/3. Raha tsorina dia midika izany fa mampidi-doza ny 1% amin'ny renivohitsika isika hahazoana tombony 3%. Amin'ny fanaovana izany dia mila manana varotra mahomby iray isaky ny telo isika mba ahazoana tombony.
Ity dia manazava tsara. Rehefa dinihina tokoa, dia mandeha tsy misy filazana fa mila fantatrao hoe iza amin'ireo mpivady no mifandraika amin'izany.
Tokony homarihintsika fa ny mpandalina an-trano ao amin'ny CryptoSignals.org dia manam-pahaizana manokana amin'ny tsenan'ny cryptocurrency. Tsy vitan'ny hoe tafiditra ao anaty crypto-to-fiat io, fa ny mpivady crypto-to-crypto koa.
Ho an'ireo tsy mahalala, ny mpivady crypto-to-fiat dia hanana vola dizitaly iray toy ny Bitcoin ary vola fiat iray toy ny dolara amerikana. Amin'ity ohatra ity, ny mpivady dia hisolo tena ny BTC / USD.
Raha ny tokony ho izy, ity no mpivarotra cryptocurrency be mpividy indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria - miaraka amina miliara dolara manova tanana isan'andro sy isan'andro. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, maro amin'ireo famantarana crypto azonao avy aminay, CryptoSignals.org no hifantoka amin'ity tsena ity.
Na izany aza, ny mpivarotra eto amintsika koa dia mahay amin'ny varotra karazana mpivady crypto-to-crypto isan-karazany. Anisan'izany ny mitovy amin'ny BTC / ETH - midika izany fa mifanakalo ny tahan'ny fifanakalozana Bitcoin sy Ethereum.
Ny mpivady crypto iray hafa izay tian'ny mpandalina eto an-toerana mivarotra dia XRP / XLM. Izy io dia misy an'i Ripple sy Stellar ary manome fotoana betsaka amin'ny signal crypto noho ny toetrany miovaova be loatra.
Ny metric key fanampiny izay tsy maintsy atao ao amin'ny habaky ny signal crypto dia ny làlan'ny tsena. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tokony handeha lava sa fohy amin'ny varotra ianao? Raha tsy misy an'ity fampahalalana ity dia tsy hisy dikany ny famantarana crypto.
Ho an'ireo tsy mahalala:
Raha milaza aminao ny ela ny famantarana crypto antsika dia midika izany fa mieritreritra izahay fa hitombo ny sandany
Raha milaza aminao ny fohy ny famantarana crypto, dia midika izany fa mieritreritra izahay fa hihena ny sandany
Mba hanazavana bebe kokoa:
Raha manome baiko anao handeha lava ny famantarana crypto dia mila mametraka baiko mividy amin'ny broker crypto voafidinao ianao
Raha toa kosa ka milaza aminao ny marika fohy ny famantarana ny crypto, dia mila mifidy kaomandy mivarotra kosa ianao
Ny ekipan'ny mpandinika antsika ao amin'ny PipSignals dia mahazo aina mandeha lavitra ary fohy amin'ny tsiroaroa crypto. Zava-dehibe, tsy misy fifandraisana ara-pientanam-po amin'ny vola nomerika isan-karazany izay hatakalontsika. Fa kosa, ny tanjontsika lehibe dia ny hahazo tombony amin'ilay toerana.
Aza manao hadisoana amin'izany - ny famantarana crypto tsara indrindra dia ho avy hatrany miaraka amin'ny vidin'ny kaomandy takiana. Raha vaovao amin'ny varotra ianao, amin'ny ankapobeny dia manana safidy roa ianao amin'ny fidirana amin'ny tsena.
Raha atao default dia manontany anao ny ankamaroan'ny broker an-tserasera raha te hametraka 'baiko' ianao. Midika fotsiny izany fa hanatanteraka ny varotrao eo noho eo ny broker - amin'ny vidiny manaraka.
Na dia tsara ho an'ny fampiasam-bola maharitra aza izany dia tsy dia mety amin'ny varotra crypto maharitra. Izany dia satria manohitra ny risika kokoa ny miditra varotra amin'ny vidiny manokana - toy ny fikarohana ifotony izay efa natao.
Ohatra, andao hatao hoe isika ao amin'ny CryptoSignals.org dia mivarotra BTC / USD - izay vidiny amin'ny $ 49,500.
Ny ekipan'ny mpandinika ao an-trano dia mety mijery ireo teknika ary manapa-kevitra fa raha tokony handika ny $ 50,000 XNUMX ny BTC / USD - dia tokony horaisina ny toerana lavitra.
Mba hahazoana antoka fa miditra amin'ny vidiny mihoatra ny $ 50,000 fotsiny isika - fa tsy ny vidiny $ 49,500 XNUMX ankehitriny - eto no miditra ny kaomandy ferana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, mba hampiharana ny varotra antsika amin'ny $ 50,000 - dia tsy maintsy mamorona lamina voafetra amin'ity vidiny ity isika. Rehefa manao izany isika dia tsy hanao afa-tsy ny varotra ataontsika ny mpivarotra raha toa ka 50,000 XNUMX $ ny vidin'ny BTC / USD. Mandra-pahatongan'izany dia mbola miandry ny lamina fetra.
Amin'ny tranga rehetra tsy fahita firy, ny signal crypto rehetra ao amin'ny CryptoSignals.org dia ho tonga miaraka amin'ny vidin'ny kaomandy voafetra. Ny tokana tokana eto dia raha mahita ny raharaham-barotra tokony harahina haingana isika mba tsy ho diso anjara.
Hatreto dia napetraka izahay fa ny famantarana crypto tsara indrindra dia hilaza aminao ny mpivady tokony hivarotra, na tokony handeha lavitra na ho fohy ianao, ary ny vidin'ny fidirana tokony hametrahanao ny lamina voafetrao.
Na izany aza, antsasaky ny ady ihany io. Rehefa dinihina tokoa, raha te hifanakalo varotra amin'ny fomba mahasosotra dia tokony hanana tetika fidirana amin'ny toerany ianao.
Indray mandeha indray, izahay ao amin'ny CryptoSignals.org dia manome toky fa manana ny fampahalalana rehetra ilainao hahazoana tombony amin'ny famantarana crypto izahay - izany no antony nanomezantsika hatrany ny baiko fampijanonana sy fahazoana tombony. Mikasika ny fijanonana fatiantoka, ity dia fitaovana fitantanana risika izay miantoka antsika tsy hamoy vola be amin'ny varotra - raha tsy tokony handeha drafitra izany.
Zava-dehibe izany, satria na dia manana firaketana an-tsoratra efa ela aza isika tamin'ny fanatanterahana ny tsenan'ny crypto - tsy milaza izahay fa handresy ny varotra tsirairay avy.
Mifanohitra amin'izany, hisy hatrany ny varotra very. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia manome soso-kevitra izahay momba ny vidin'ny kaomandy fihenam-bidy sahaza anao izay tokony haparitanao rehefa mihetsika amin'ny famantarana crypto anay.
Ao amin'ny ohatra famantarana crypto izay nomenay teo aloha, dia nanamarika izahay fa ny toerana lava dia tokony hapetraka amin'ny BTC / USD amin'ny vidin'ny fidirana 231.79 $. Nanambara ihany koa izahay fa ny baiko fijanonana dia tokony apetraka amin'ny $ 229.48.
Antony tsara izany - satria maneho fatiantoka 1% faran'izay betsaka izany. Izany hoe raha tokony hanohitra antsika 1% ny BTC / USD ary avy eo dia mahatratra $ 229.48 ny vidiny - hidina ny kaomandy fijanonana. Rehefa vita izany dia hanidy azy io ho azy ny broker crypto ary handeha isika miala miaraka amin'ny fatiantoka kely 1%.
Misy fampahalalana iray manan-danja kokoa izay homen'ny signal crypto tsara indrindra ho anao - ary izany dia vidin'ny kaomandy ahazoana tombony. Io dia mitovy amin'ny baiko fampijanonana, fa tsy hanalefahana ny loza mety hitranga amintsika, hikatsaka ny hidina amin'ny tombom-barotra azontsika amin'ny varotra izy io.
Ao amin'ny ohatra nomenay teo aloha, dia nanamarika izahay fa ny vidin'ny kaomandy maka tombony dia $ 238.74. Miorina amin'ny 3% ambonin'ny vidin'ny lamandy voalaza momba ny $ 231.79 - midika izany fa mitady hahazo tombony 3% amin'ity famantarana crypto manokana ity izahay.
Indray mandeha indray, raha tokony hohajain'ny tsena ny vidin'ny tombony, dia hanidy ho azy ny varotra crypto. Araka izany, afaka mihidy amin'ny tombom-barotra tsy mila mipetraka eo amin'ny fitaovantsika hivoahana amin'ny tanana isika.
Mialoha ny fizarana etsy ambony momba ny baiko fampijanonana sy fahazoana tombony, ny ekipan'ny mpandinika antsika ao amin'ny CryptoSignals.org dia hanana ny tahan'ny risika / valisoa foana rehefa mandefa signal crypto.
Ao amin'ny ohatra etsy ambony, ny risika dia 1% - satria izany no isan'ny volavolan-dalàna momba ny fijanonana. Ny ampahany valisoa amin'ny fampitahana dia 3% - satria teo no nametrahanay ny kaomandin'ny tombom-barotra.
Zava-dehibe, ny ankamaroan'ny famantarana crypto alefanay dia hanaraka ny tahan'ny risika / valisoa 1/3. Raha tsorina dia midika izany fa mampidi-doza ny 1% amin'ny renivohitsika isika hahazoana tombony 3%. Amin'ny fanaovana izany dia mila manana varotra mahomby iray isaky ny telo isika mba ahazoana tombony.
Signal Crypto ho an'ny vao manomboka ao amin'ny CryptoSignals.org
01. Fantaro ny tsena
Moa ve ianao mitady varotra crypto toy ny Bitcoin,
Ethereum, ary Ripple - saingy tsy dia mahatakatra ny fomba fiasan'ity tsena ity?
Raha izany dia tokony ho fantatrao fa ireo mpivarotra efa za-draharaha dia nandany taona maro tamin'ny fianarana ny fomban'ny famakafakana ara-teknika. Midika izany
manao fikarohana mandroso momba ny fironana amin'ny vidin'ny cryptocurrency amin'ny alàlan'ny famantarana marobe. Mieritrereta manaraka ny tsipika an'ny RSI, MACD, Moving Averages, sns.
02. Mahazoa ny fari-pahaizantsika
Ny marina dia - raha tsy manana ny fahaiza-manao hametraka teknika ianao
fikarohana amin'ny ambaratonga avo lenta, ho sahirana ianao hanao
tombony tsy miova amin'ny indostrian'ny varotra crypto. Fa kosa, misy ny vintana rehetra hahatongavanao amin'ny fifandanjan'ny kaontinao. Ho setrin'izany, mamela anao hivarotra ny tsenan'ny cryptocurrency ianao nefa tsy mila mametraka an'izay asa vita.
Etsy ankilany, tokony homarihintsika ihany koa fa ny famantarana crypto antsika dia tsy mety amin'ny zaza vao teraka. Mifanohitra amin'izany, mety tsy manam-potoana hikarohana ny tsena fotsiny ianao. Araka izany, CryptoSignals.org dia afaka manampy ny mpivarotra amin'ny fahaiza-manao rehetra!
03. Varotra amin'ny tombom-barotra
Ity no ahafahan'ny CryptoSignals.org manampy. Rehefa manazava amin'ny antsipiriany bebe kokoa hatrany izahay, dia hilaza aminao ny famantarana crypto
ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hivarotra amin'ny fomba tsy atahorana. Izany hoe raha vantany vao mahazo famantarana avy aminay ianao - dia ho fantatrao hoe iza ny mpivady crypto hifanakalozana, na tokony handeha lavitra na ho fohy ianao, ary inona ny vidiny fidirana sy fivoahana kendrenao.
Izany no lazain'ny mpanjifanay
Tsy fantatro izay nataoko fa hatramin'ny nidirako tao amin'ny vondrona telegram maimaim-poana dia nanokatra kaonty iray aho izao matihanina broker ary izaho izao manaraka ny varotra avy amin'ny vondrona VIP. Novakiako izao ny famakafakana ara-teknika isan'andro ary manaraka ny youtube fantsona ary jereo ny horonan-tsary rehetra.
Nianarako zavatra bebe kokoa momba ny crypto hatramin'ny nidirako tao amin'ny VIP Telegram vondrona. Ery dia lahatsoratra isan'andro afaka aho vakio ary avy eo varotra hamerina izany fampahalalana. Izany 10 avy amin'ny 10 ho ahy.
Niditra tao amin'ny Telegram maimaim-poana aho avy eo nanatsara haingana ny vondrona VIP. Hitako fa tena mampahalala ny fanadihadiana ara-teknika ary tena manampy ahy hianatra bebe kokoa momba ny cryptocurrency sy ny fomba fifanakalozana izany.
Ny famantarana izay omena dia tena mora arahana.
MANDEFANA NY FANONTANIANA TEKNIKA FENO ISIKA AMIN'NY VAROTRA REHETRA, JEREO NY ohatra momba ny varotra eto ambany!
Ireo mpivarotra eto amintsika dia nisaina tamin'ny fivarotana gorodona miorina manerana izao tontolo izao!
Afaka miditra amin'ny maimaim-poana ianao Vondrona VIP etsy ambany miaraka amin'ny tsindry bokotra iray hijerena ohatra ny varotra ataonay.
HO AN'NY SIGNALS CRYPTO SOA
Tsy vitan'ny hoe mila mahita ny mari-pamantarana crypto tsara indrindra eny an-tsena ianao, fa koa mpivarotra manana isa ambony indrindra hametraka ny baiko takiana. Rehefa dinihina tokoa, raha tsy misy broker tsara eo anilanao dia tsy ho tafiditra amin'ny sehatry ny varotra crypto ianao.
Alohan'ny hijerenao ny sarany sy ny kaomisiona aza, zava-dehibe ny fampiasanao ireo famantarana crypto anay miaraka amin'ny mpivarotra voafetra sy azo antoka. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny sehatry ny varotra crypto dia miasa tsy misy fahazoan-dàlana mifehy - izay tena olana. Raha tsorina dia midika izany fa tsy mila mamaly ny rafitra ara-bola na inona na inona ny mpivarotra - ka ny zavatra toy ny fikarakaran'ny mpanjifa sy ny fiarovana ny mpampiasa vola dia matetika tsy misy. Mba hanampiana anao hanondro anao amin'ny lala-mahitsy - ny sasany amin'ireo mpibaiko manan-danja amin'ity habaka ity dia ahitana ny FCA (UK) SEC (US), ASIC (Aostralia), ary CySEC (Sipra). ...
Kaomisiona sy fanaparitahana
Satria ny sasany amin'ireo famantarana crypto dia mikendry tombony haingana sy maotina, tena zava-dehibe ny hisafidiananao broker manome komisiona ambany sy fanaparitahana tery. Mikasika ny teo aloha, misy broker crypto marobe miasa ao amin'ny habakabaka ahafahanao mivarotra tsy misy komisiona. Midika izany fa ny vola tokana aloanao dia amin'ny alàlan'ny fanaparitahana.
Tsy ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrona CryptoSignals VIP Telegram dia manana renivola betsaka hifanakalozana. Raha toa anao ity, tsy midika izany fa tsy afaka mahomby amin'ny famantarana ataonay ianao. Mifanohitra amin'izany, amin'ny alàlan'ny fampiasana broker crypto izay manolotra tombony, dia afaka hivarotra zavatra betsaka noho izay anananao ao amin'ny kaontinao ianao. Ny habetsaky ny tombam-bidy azonao azonao dia miankina amin'ny lafin-javatra maro - toy ny mpivarotra voatanisa sy ny firenena onenananao.
Satria ny mpanolotra anao voafidy dia manolotra tsena fifanakalozam-bola dizitaly, tsy midika izany fa ho mety amin'ny famantarana crypto antsika izy io. Rehefa dinihina tokoa, ny ekipan'ny mpandinika ao an-trano dia maniry ny handray fomba maro samihafa amin'ny varotra - izay midika fa mikendry ny mpivady crypto amin'ny endrika sy habe rehetra izy ireo. Ohatra, ny famantarana iray dia mety misy ifandraisany amin'ny BTC / USD raha toa kosa ny manaraka mety hahazo tombony amin'ny ETH / XRP! Raha izany no eritreretina dia tsara kokoa ny mampiasa broker crypto izay manolotra tsena marobe - manarona ny mpivady crypto-to-fiat sy crypto-to-crypto.
Tokony ho azonao antoka koa fa manome ny fomba fandoavam-bola tianao ny broker crypto voafidinao. Ireo sehatra tsara indrindra tianay hampiasa tolotra debit / carte de crédit ary e-wallet deposito. Io dia ahafahanao mamatsy vola ny kaontinao eo noho eo sy amin'ny tranga maro - maimaim-poana. Azonao atao ny manalavitra ireo sehatra tsy manaiky afa-tsy ny fandoavam-bola amin'ny banky. Izany dia satria afaka andro vitsivitsy vao tonga ny vola.
Milaza izany fa Bitcoin no be mpividy indrindra amin'ity tsena ity. Araka izany, ireo mpivarotra eto amintsika dia hijery ara-dalàna ny tombony azo avy amin'ity sokajin-karena be ranoka ity. Na dia amina tranga maro aza dia handefa ny famantarana Bitcoin momba ny varotra amin'ny BTC / USD izahay - manarona ireo mpivady crypto-to-crypto koa izahay. Ohatra, raha mieritreritra ny mpikaroka ao an-trano fa ny BTC dia be loatra amin'ny ETH - dia handefa famantarana varotra Bitcoin miaraka amin'ny zavatra hitanay izahay. Mba hanomezana anao hevitra ny fomba fiasan'ny signal trading Bitcoin tsara indrindra eto amin'ny CryptoSignals.org - jereo ity ohatra etsy ambany ity. Pair: baiko BTC / USD: Sho ...
Mety nahatsikaritra ianao fa ny mari-pamantarana crypto tsara indrindra eny an-tsena dia azon'ny vondrona Telegram. Izany dia satria hahazo signal crypto tsara amin'ny fotoana tena izy ianao - midika izany fa tsy hahita fotoana mety ahazoana tombony intsony ianao! Ny marika crypto tsara indrindra Vondrona Telegram matetika dia misy mpikambana mavitrika an'arivony. Io dia ahafahanao sy ny namanao miady hevitra momba ny varotra crypto amin'ny alàlan'ny fampiharana. Ny marika crypto tsara indrindra vondrona Telegram dia miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny fotoana maharitra. Mbola zava-dehibe kokoa aza, amin'ny fahazoana mari-pamantarana kalitao amin'ny alàlan'ny Telegram - ny mpamatsy tsara indrindra ...
Alohan'ny hijerenao ny sarany sy ny kaomisiona aza, zava-dehibe ny fampiasanao ireo famantarana crypto anay miaraka amin'ny mpivarotra voafetra sy azo antoka.
Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny sehatry ny varotra crypto dia miasa tsy misy fahazoan-dàlana mifehy - izay tena olana.
Raha tsorina dia midika izany fa tsy mila mamaly ny rafitra ara-bola na inona na inona ny mpivarotra - ka ny zavatra toy ny fikarakaran'ny mpanjifa sy ny fiarovana ny mpampiasa vola dia matetika tsy misy.
Mba hanampiana anao hanondro anao amin'ny lala-mahitsy - ny sasany amin'ireo mpibaiko lehibe ato amin'ity habaka ity dia misy ny SEC (US) FCA (UK), ASIC (Aostralia), ary CySEC (Sipra).
Satria ny sasany amin'ireo famantarana crypto dia mikendry tombony haingana sy maotina, tena zava-dehibe ny hisafidiananao broker manome komisiona ambany sy fanaparitahana tery.
Mikasika ny teo aloha, misy broker crypto marobe miasa ao amin'ny habakabaka ahafahanao mivarotra tsy misy komisiona. Midika izany fa ny vola tokana aloanao dia amin'ny alàlan'ny fanaparitahana.
Satria ny mpanolotra anao voafidy dia manolotra tsena fifanakalozam-bola dizitaly, tsy midika izany fa ho mety amin'ny famantarana crypto antsika izy io.
Rehefa dinihina tokoa, ny ekipan'ny mpandinika ao an-trano dia maniry ny handray fomba maro samihafa amin'ny varotra - izay midika fa mikendry ny mpivady crypto amin'ny endriny sy habe rehetra izy ireo. Ohatra, ny famantarana iray dia mety misy ifandraisany amin'ny BTC / USD raha toa kosa ny manaraka mety hahazo tombony amin'ny ETH / XRP!
Raha izany no eritreretina dia tsara kokoa ny mampiasa broker crypto izay manolotra tsena marobe - manarona ny mpivady crypto-to-fiat sy crypto-to-crypto.
Tokony ho azonao antoka koa fa manome ny fomba fandoavam-bola tianao ny broker crypto voafidinao. Ireo sehatra tsara indrindra tianay hampiasa tolotra debit / carte de crédit ary e-wallet deposito. Io dia ahafahanao mamatsy vola ny kaontinao eo noho eo sy amin'ny tranga maro - maimaim-poana.
Azonao atao ny manalavitra ireo sehatra tsy manaiky afa-tsy ny fandoavam-bola amin'ny banky. Izany dia satria afaka andro vitsivitsy vao tonga ny vola.
Milaza izany fa Bitcoin no be mpividy indrindra amin'ity tsena ity. Araka izany, ny mpivarotra dia hijery matetika ny tombony azo avy amin'ity kilasy fananana tena be ranoka ity.
Na dia amina tranga maro aza dia handefa ny famantarana Bitcoin momba ny varotra amin'ny BTC / USD izahay - manarona mpivady crypto-to-crypto koa izahay. Ohatra, raha mieritreritra ny mpikaroka ao an-trano fa ny BTC dia be loatra amin'ny ETH - dia handefa signal trading Bitcoin miaraka amin'ny zavatra hitanay izahay.
Mba hanomezana anao hevitra ny fomba fiasan'ny fambara varotra Bitcoin tsara indrindra eto amin'ny CryptoSignals.org - jereo ity ohatra eto ambany ity.
Pair: BTC / USD
Fetra: 61,500 $
Ajanona-very: $ 62,000
Raiso-tombony: $ 57,000
Ny soso-kevitry ny fambara Bitcoin etsy ambony dia mampiseho fa ny mpivarotra ao an-trano dia mino fa hihena ny BTC / USD amin'ny ora ho avy. Saingy, tsy te hiditra amin'ny tsena izahay, raha tsy hoe manohina ny teboka faran'izay tiany ny mpivady - izay amin'ity ohatra ity dia $ 61,500 XNUMX.
Mba hahazoana antoka fa voarohirohy isika raha misy fiakarana ambony hatrany, ny soso-kevitr'ireo fambara Bitcoin dia manoro hevitra ihany koa ny vidin'ny stop-loss $ 62,000.
Ity dia zavatra iray izay omenay foana rehefa mizara ny famantarana Bitcoin kalitao izahay - satria hainay tsara ny varotra manohitra risika. Ny mari-pamantarana varotra Bitcoin anay dia misy kaomandy fitadiavam-bola aroso koa. Raha toa ka voatazona dia hidina ho azy eo ny tombom-barotrao amin'ny broker crypto nofidinao.
Fambara ara-barotra Bitcoin maimaim-poana
Eo an-tsena hahazo famantarana Bitcoin maimaimpoana ve ianao? Raha izany, izahay ao amin'ny CryptoSignals.org dia manolotra serivisy famantarana Bitcoin maimaim-poana izay misy soso-kevitra ara-barotra telo isan-kerinandro. Tsy toy ny maro amin'ireo mpifaninana aminay - tsy mangataka aminao izahay handoa vola fanampiny hanambarana ny lamandy na ny vidin'ny fijanonana.
Mifanohitra amin'izay dia ho azonao ny fampahalalana rehetra noresahintsika tetsy ambony - ka io ny mpivady Bitcoin, toerana lava na fohy, ary fetrany, fijanonana ary fividianana tombony.
Ny antony anoloranay ireo fividianana varotra Bitcoin maimaimpoana dia ny famelana ireo mpikambana vaovao hisedra ny serivisinay alohan'ny hanaovana fanoloran-tena. Amin'ny maha-zava-dehibe azy, ny zavatra rehetra ilainao hatao hahazoana ny signal Bitcoin maimaimpoana dia ny fisoratana anarana kaonty miaraka aminay eto amin'ny CryptoSignals.org.
Tsy mila mametraka vola ianao raha te hahazo fidirana amin'ireo famantarana varotra crypto maimaim-poana. Fa kosa, rehefa nisoratra anarana ianao - dia afaka mankany amin'ny vondrona signal Telegram maimaimpoana!
Mety nahatsikaritra ianao fa ny mari-pamantarana crypto tsara indrindra eny an-tsena dia azo alaina amin'ny alàlan'ny vondrona Telegram. Izany dia satria hahazo signal crypto tsara amin'ny fotoana tena izy ianao - midika izany fa tsy hahita fotoana mety ahazoana tombony intsony ianao!
Ny marika crypto tsara indrindra Vondrona Telegram matetika dia misy mpikambana mavitrika an'arivony.
Io dia ahafahanao sy ny namanao miady hevitra momba ny varotra crypto amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Ny marika crypto tsara indrindra vondrona Telegram dia miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny fotoana maharitra.
Ny tena zava-dehibe kokoa aza, amin'ny fahazoana mari-pamantarana kalitao amin'ny alàlan'ny Telegram - ireo mpamatsy tsara indrindra amin'ity habaka ity dia hametaka sary na tabilao isaky ny sosokevitra ihany koa.
Raha atao teny hafa, ny marika crypto tsara indrindra Telegram vondrona mamela anao hahazo sy hianatra amin'ny fotoana iray.
Alohan'ny hanombohanao ny vondrona crypto signal Telegram tsara indrindra nofidinao, dia hanome sosokevitra fampandrenesana manokana izahay. Amin'ny fiantohana io fampandrenesana feo io dia tsy manam-paharoa amin'ny vondrona crypto signal Telegram anao - ho fantatrao fa hanokatra avy hatrany ny fampiharana ianao hahafahanao mametraka ireo baiko naroso.
Vondron-telegraman'ny Crypto Signals maimaim-poana
Ny sasany aminareo dia mety maniry ny hanandrana ireo famantarana crypto kalitao alohan'ny hanatsarana ny drafi-bola Premium. Raha izany dia ho faly ianao hahafantatra fa manolotra vondrona Telegram signal crypto maimaimpoana koa izahay. Vantany vao tafiditra ao amin'ny fantsona Telegram tsy mitsaha-mitombo ianao - dia hahazo signal crypto 3 x isan-kerinandro.
Mety handrakotra ny mpivady crypto-to-crypto toy ny BTC / EUR, BTC / USD, na ETH / USD. Amin'ny tranga hafa, ny sasany amin'ireo signal crypto maimaimpoana ho antsika dia handrakotra ireo mpivady izay misy fananana nomerika roa. Ohatra, mandefa matetika ireo famantarana crypto maimaimpoana izahay amin'ny BTC / ETH, BTC / XRP, ary ETH / LTC.
Raha vantany vao mahazo signal crypto maimaimpoana amin'ny alàlan'ny vondrona Telegram izahay - ny hany ilainao dia ny mankany amin'ny broker voafidinao ary apetraho ireo baiko naroso. Raha ny marina, raha mpivarotra mahira-tsaina ianao dia mety manapa-kevitra ny hitsapa anay amin'ny alàlan'ny kaonty demo mpanelanelana maimaim-poana.
Raha manao izany - tsy mila miatrika varotra tokana na iray aza amin'ny famantarana crypto maimaimpoana izahay. Fa kosa, ianao dia hametraka ny volavolan-kevitray miaraka amin'ny 'vola taratasy'. Aorian'ny nikatona ny toeran'ny signal tsirairay dia azonao atao ny manoratra ny vokatry ny toerana.
Ohatra, raha nanao pips 25 tamin'ny mari-pamantarana crypto maimaim-poana isika dia aza hadino ny manamarika an'io. Amin'ny faran'ny fitsapana anao - raha hitanao fa nahatratra ny antenainao ireo famantarana crypto maimaimpoana nataonao, dia azonao atao ny mieritreritra ny hanavao ny drafitra premium anay. Amin'izany dia hahazo marika crypto premium 3-5 isan'andro ianao!
INONA NO INDRINDRA AO AMIN'NY SIGNAL VIP CRYPTO ANTSIKA GROUP TELEGRAM
Miaraha amin'ireo mpikambana ao amin'ny 10,000+ misy manerana an'izao tontolo izao izay nahazo tombony tamin'ny Signal Crypto VIP ary lasa mpivarotra matihanina.
2-3Signal Crypto isan'andro
10k +Mpikambana telegram
Vonona ho tonga ve ianao
MPIVAROTRA CRYPTO MAHAY
CryptoSignals.org dia ekipa mpivarotra efa za-draharaha efa nanao varotra ny tsenan'ny cryptocurrency hatramin'ny 2014, nanapa-kevitra ny hamorona vondrom-piarahamonina iray izahay telegrama mba hahafahan'ny hafa mianatra avy amin'ireo famantarana marina momba ny cryptocurrency.
HITSIDIHO IZAO AMIN'NY MEDIA SOSIALY
Famantarana Crypto maimaim-poana tsara indrindra Mey 2022 & Vaovao Crypto
Grand Cayman, KY1-1111, NY
© 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG. AZO AZO TSARA.
Ny fampahalalana ao amin'ny tranokala cryptosignals.org sy ao anatin'ny vondrona Telegram anay dia natao ho an'ny fanabeazana ary tsy azo raisina ho torohevitra momba ny fampiasam-bola. Ny varotra ny tsenam-bola dia mitondra risika avo lenta ary mety tsy mety amin'ny mpampiasa vola rehetra. Cryptosignals.org dia tsy mandray andraikitra amin'ny fatiantoka vokatry ny votoaty omena ao anatin'ny vondrona Telegram.
Ny ekipan'ny Crypto Signals dia tsy mifandray aminao mivantana ary tsy mangataka fandoavam-bola. Mifandray amin'ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny [email voaaro] Tsy manana afa-tsy fantsona Telegram maimaim-poana iray izahay izay hita ao amin'ny tranokala. Ny vondrona VIP dia misy aorian'ny fividianana famandrihana. Raha maharay hafatra avy amin'iza na iza ianao dia mitatitra ary aza mandoa vola. Tsy ekipa Crypto Signals ity